Myanmar Visa | Paypal Myanmar
How to Open Pay Pal Account in Easiest Way.
“PayPal isaservice that enables you to pay, send money, and accept payments. Register your credit card or debit card with your PayPal account. … Simply choose PayPal when you selectapayment option on this site, and you can quickly openaPayPal account and add your payment method to complete your purchase.
Here is the video and Description of how to openaPaypal account in easiest way How to CreateaPayPal Account? PayPal isabank card that allows you to transfer money quickly and easily. Receive money, It isaservice that can make payments. HavingaPayPal account allows you to buy and sell goods abroad. It is important that money transfers are made. Here’saquick guide to how to set upaPayPal account. A Gmail account is one of the main requirements for creatingaPayPal account. Before openingaPayPal account, openaseparate Gmail account. First, log in to Paypal.com. Click on Sign up and you will be asked to selectapersonal account orabusiness account. Personal accounts should only be used for personal information. If you haveabusiness account, you will need your business type and business number. Here’s how to createapersonal account. If you haveapersonal account, you can also upgrade your business account to learn how to createapersonal account. Click Pay up in PayPal.com, select Personal Account, and then click Next. Next, you will need to send names, emails, Enter your password When done, click Next. Apt, Ste, and Bldg. You will be asked to enter City and State phone numbers. Myanmar is notoriously difficult to add. If you are in another country you will get it. Just click on the New tab and click on the Fake address generator. Check out his Fake Generator and copy it from the Fake generator. Apt, Ste and Bldg can be added to street addresses. After that, all you need to do is click Pay Next and getaPayPal acc … However, you will getamessage sent to Gmail andamessage sent by PayPal. Enter the message and confirm the email. Then you will getaPapal account and you will be connected to Bank. Go to Wallet in your PayPal account and connect to your bank account or debit and credit card … The next day we will talk about how to connect withabank and tell you how to makeadeposit.
Notice of Amendment to PayPal Legal Agreements Issued: January 2, 2020
You can find the current PayPal User Agreement by clicking here or accessing it via the “AGB”, "Legal" or “Legal Agreements” footer on most PayPal site pages.
1. Fees – Commercial Transaction Refund Fee
Section A4.3. (Commercial Transaction Refund Fee) of Schedule 1 (Table of Fees) is amended to clarify that, if you carry outarefund ofaCommercial Transaction payment, all of the fees originally paid by you to receive the payment will not be returned to you.
Section A4.3. (Commercial Transaction Refund Fee) of Schedule 1 (Table of Fees) (presented in context with the column headings) now reads as follows (with amendments shown in italic):
A4.3. Commercial Transaction Refund Fee
If you refundaCommercial Transaction payment, there are no fees to make the refund, but the fees you originally paid to receive the payment are no returned to you.
Sections of the PayPal User Agreement have been amended to clarify and reorganize existing wording and correct minor typographical errors.
Referenced From paypal.com
ဗဟိုဘဏ်မှ WeChat Pay အသုံးပြုမှုကို ထပ်မံသက်တမ်းတိုး (29,July,2019)
WeChatPay(တရုတ်အီလက်ထရောနစ်ငွေပေးချေစနစ်)အသုံးပြုမှုကို ဗဟိုဘဏ်မှ ထပ်မံသက်တမ်းတိုးပေးကြောင်း ဗဟိုဘဏ်ညွှန်ုကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်မှပြောပါတယ်။
ဗဟိုဘဏ်မှ စမ်းသပ်ကာလသုံးလအဖြစ် မတ်လကုန်မှစတင်ကာ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး တံတားဦးလေဆိပ်တွင် အဆိုပါငွေပေးချေမှုကို စတင်အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့သည်။ “ ငွေလွဲ တဲ့ပမာဏတွေလည်းများတယ်။နောက်ထပ်သုံးလထပ်တိုးပေးထားတယ်။အရင်နေရာမှာလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးတာပါ။အခြေအနေကောင်းပါတယ်။” ဟုထပ်မံပြောကြားသွားပါသည်။
ယင်းကဲ့သို့ခွင့်ပြုပေးခြင်းသည် သတ်မှတ်ဧရိယာတွင် သတ်မှတ်ထားသည့်ကာလအတိုင်းအတာတွင်း ခွင့်ပြုပေးခြင်းဖြစ်သည်။ယင်းအတွက် ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကို ဗဟိုဘဏ်သို့ အပတ်စဉ် အစီရင်ခံစာတင်ရသည်ဟု ဆိုသည်။
တရားမဝင်ငွေပေးချေမှု လုပ်ငန်းများ(ပြည်တွင်း) ကိုဗဟိုဘဏ်မှခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီးနောက် မတ်လကုန်တွင်WeChat Pay က မြန်မာနိုင်ငံတွင် စတင်အသုံးပြုနိုင်ရန် လျှောက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဗဟိုဘဏ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။WeChat Pay နှင့်တရားမဝင်ပေးချေမှုများပြုလုပ်နေကြသော်လည်း ပြည်တွင်းသို့ ငွေကြေးပြန်ဝင်မှုမရှိသောကြောင့် ၎င်းစနစ်သည် နိုင်ငံခြားငွေများကို ပြည်တွင်းသိ့ တရားဝင် ပြန်ရောက်လာရန် ဖြစ်သည်ဟု အဆိုပါဘဏ်မှ ပြောဆိုထားပါသည်။
ပြည်တွင်းရှိ Paypb ကုမ္ပဏီသည် WeChatPay ကို ပြည်တွင်းကုမ္ပဏီအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ယင်းကုမ္ပဏီသည် WeChatPay မှပေးချေသည့် ငွေများကို တရုတ်ဘဏ်မှတစ်ဆင့် ပြည်တွင်းရှိ KBZ သို့ KBZ ဘဏ်မှ လုပ်ငန်းရှင်များထံသို့ လွဲပြောင်းပေးခြင်းဖြစ်သည်။WeChat Pay ကိုတံတားဦးလေဆိပ်ရှိ ဆိုင်၁၄ဆိုင်တွင်စတင်အသုံးပြုမည် ဖြစ်သည်။စမ်းသပ်ကာလ ကျော်လွန်ပြီး အောင်မြင်လျှင်တရုတ်ခရီးသွားများပြားသည့်နေရာများမှာ အသုံးပြုနိုင်မည်ဟု ကုမ္ပဏီအုပ်ချုပ်မှုဒါရိုက်တာ ဦးစည်သူဖြိုးက ပြောကြားသွားပါသည်။
Reference from: 7Day Daily News
Myanmar Visa သည် Paypal ၏ Verified Premier Member ဖြစ်ပြီး 2003 ခုနှစ်မှစ၍ မြန်မာပြည်အတွင်းမှ စသုံးခဲ့ပါသည်။ ဤအချက်အလက်များသည် ပြည်တွင်းအသုံးပြုသူများ ဗဟုသုတရရန် အတွေ့အကြုံဖလှယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ မေးခွန်းနှင့်အဖြေများကိုFacebook တွင်ဆက်လက်ကြည့်ရှုပါရန်။Please Click Here for Latest Update.
ပြည်တွင်းမှာ ဘဏ်ကတ်နဲ့ ပေးလ်ပဲလ်ချိတ်လို့ရလာတာကြောင့်
အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုဖြစ်တဲ့ payment စနစ်မှာ နိုင်ငံတကာလိုအသုံးပြုလို့ ရလာပြီဖြစ်တာကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံက ထုတ်ကုန်တွေကို နိုင်ငံတကာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်တဲ့ အခါမှာ အဆင်ပြေလာတော့မှာဖြစ်တယ်လို့ ပြည်တွင်းရှိ နည်းပညာရှင်အချို့က သုံးသပ်ကြပါတယ်။အွန်လိုင်းငွေချေမှုက Paypal လို Payment Service မျိုးကို ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါကတော့
အပြင်က ဘဏ်တွေအထိ တကူးတကငွေချေးယူတာတွေ၊ ငွေလွှဲပေးတာတွေကို လုပ်စရာမလိုဘဲ နိုင်ငံခြားဝက်ဘ်ဆိုက်တွေမှာ အွန်လိုင်းကနေတစ်ဆင့် အကောင့်ရှိရုံ နဲ့ငွေချေးယူတာတွေ၊ ငွေလွှဲတာ တွေလုပ်တဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သည်လိုအွန်လိုင်းငွေချေမှုစနစ် လွယ်ကူလာတာကြောင့် အွန်လိုင်းကနေ ဈေးရောင်းဈေးဝယ်လုပ်သူ တွေအနေနဲ့ ဘဏ်အထိသွားစရာမလိုတော့ဘဲကတ်နဲ့ပဲ ငွေသွင်းငွေလွှဲတွေ လွယ်လွယ်ကူကူ လုပ်လို့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ KBZ ဘဏ်နဲ့ paypal နဲ့ ချိတ်လို့ရလာပြီ၊ အွန်လိုင်းမှာငွေချေလို့အဆင်ပြေလာပြီ၊ ဆာဗာတွေဝယ်လို့ရ သွားပြီ၊ paypal သုံးလို့ရရင် တော်တော်များများပွင့်သွားပြီ၊ ဗီဇာကတ်နဲ့ဝယ်လို့ရနေပြီလို့ အိုင်တီ နည်းပညာရှင် ကိုရန်နိုင်မြင့်က ပြောပါတယ်။ Payment Gateway အဆင်ပြေလာတာကြောင့် အွန်လိုင်းကနေ Education Content (အွန်လိုင်း ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တာတွေ၊ ဆော့ဖ်ဝဲတွေ၊ အာမခံငွေသွင်းတဲ့စနစ်တွေ (Premium Service)ဝယ် ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲသည် Payment Gate-way တွေကိုလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကို အမေရိကန်က (US Sanction)ကြောင့် အရင်အစိုးရလက်ထက်မှာ ပိတ်ထားခဲ့ပေမဲ့ လက်ရှိအစိုးရ သစ်လက်ထက်မှာ မိမိလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကို တိုက်ရိုက်ဝယ်လို့ရနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ ဆန်ရှင်ဖွင့်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အွန်လိုင်းသုံးစွဲသူတိုင်းအတွက် အဓိကကျတဲ့အချက်ကတော့ paypal ရှိရင် နိုင်ငံတကာ ွအွန်လိုင်းရှော့ပင်းတွေကနေ ကမ္ဘာကျော် အွန်လိုင်းရှော့ပင်းဝက်ဆိုက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အမေဇုန် (Amazon)မှာတောင် အကောင့်ဖွင့်ပြီး paypal နဲ့ တိုက်ရိုက်ငွေချေ ဝယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ မာစတာကတ်ရှိတာနဲ့တင် အွန်လိုင်းငွေချေမှုစနစ်ကို ကောင်းကောင်းအသုံးချလို့ရနေပါပြီ။ နောက်တစ်ခုကတော့ ပြည်တွင်းရှိ developer တွေအတွက် အသုံးဝင်မယ့်နိုင်ငံခြားက developer တွေ သင်တဲ့ဗီဒီယိုတွေ ဝယ်ကြည့်နိုင်ပြီး E-book လိုစာအုပ်တွေလည်း ဝယ်ဖတ်လို့ရနေပါပြီ။ ဒါ့အပြင် ပညာရေးပိုင်း သင်တန်းတွေကိုလည်း အွန်လိုင်းကနေ တိုက်ရိုက်သင်ကြားလို့ အဆင်ပြေနေပါပြီ။ မြန်မာနိုင်ငံက မာစတာကတ်တွေကို အွန်လိုင်းမှာလက်ခံလာကြပြီ၊ အခုနောက်ပိုင်းတော့ ဘယ်ဘဏ်က ကတ်ပဲဖြစ်ဖြစ် အဆင်ပြေသွားပြီလို့ အိုင်တီနည်းပညာရှင် ကိုထက်ဝေယံစိုးက ဆိုပါတယ်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်နဲ့ ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ကွန်ပျူတာစနစ်နဲ့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်မှုအနေ အထားစစ်တမ်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံက အဆင့် ၁၃၉ မှာဖြစ်နေတာကြောင့် နည်းပညာနဲ့တွင်တွင်ကျယ်ကျယ် အသုံးချဖို့ အများကြီးလိုအပ်နေသေးတာဖြစ်ပါတယ်။
Please Click Here for Latest Update.
To pay for Myanmar Visa services, you can use PayPal. You can securely pay via PayPal's page and you will receiveaconfirmation email from Myanmar Visa as well as PayPal. We have got you covered with Paypal. We can reimburse you if something’s not right. Pay with peace of mind,	we protect your eligible purchases.
If you want to stop the visa process in the middle or we did not deliver according to our promises, Paypal and we can help you get your money back. Millions of customers around the world use Paypal for one simple reason: it’s simple. Just an email address and password will get you through to checkout before you can reach for your wallet. Want to file for refund? Get your return shipping costs refunded. If you purchase something with us and it’s not quite right, we can refund your return shipping costs*.
Question	:	Can I use Paypal in Myanmar?
Answer	:	Yes, you can use it with such service provider as MPT, Telenor, Ooredoo. Some IP might be blocked by paypal.
Question	:	How can i verify my Paypal account in Myanmar?
Answer	:	You have to use the country as Singapore andaSingapore address. If you need help call 780 204020 or email info@myanmarvisa.com
Question	:	Can I get the money from Paypal in Myanmar?
Answer	:	Yes, you have to contact the agents who specialize in gotting money from Paypal to Myanmar. Please see below :
Question	:	I want to pay Online Shopping/ eBay/ Alibaba/ Games/ Software/ Apps/ Gift Cards which accept Paypal. How can I do thet?
Answer	:	Yes, There are agents who can pay Online Shopping/ eBay/ Alibaba/ Games/ Software/ Apps/ Gift Cards with Paypal or any international credit cards or even bank transfers. Please see below :
Question	:	PayPal Account ဖွင့်ဖို့ နိုင်ငံရွေးတဲ့နေရာမှာ Myanmar မပါတော့ နိုင်ငံကို ဘာရွေးလို့ရမလဲ?
Answer	:	Singapore ကိုရွေးပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ။ ကျွန်တော်တို့ဆီက Singapore ဖုန်း၊ လိပ်စာ၊ Bank Verification တွေစီစဉ်ပေးလို့ရပါတယ်။
Question	:	Online Shopping မှာသုံးဖို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ PayPal နဲ့ ငွေလက်ခံလို့ရပြီလား?
Answer	:	ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ PayPal နဲ့ ငွေလက်ခံတာကို အာမခံနဲ့ တာဝန်ယူပြီး လုပ်ပေးပါတယ်။
PayPal Personal Account ပြုလုပ်နည်း
PayPal အကောင့် ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်ချက်များ
1. Email Account တစ်ခု
2. CB Bank မှ Master or Visa Card (လက်ရှိ စမ်းသပ်ထားသလောက် CB Bank မှ Card များဖြင့်သာ အဆင်ပြေပါသည်။)
၁။ https://www.paypal.com/sg/webapps/mpp/home သို့ သွားရောက်ပါ။ (နိုင်ငံရွေးရာတွင် Myanmar မပါသည့် အတွက် Singapore နိုင်ငံ အနေဖြင့် ဖွင့်မည်ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။) အောက်ပါအတိုင်း တွေ့မြင်ရပါလိမ့်မည်။ “Sign up now” buttom အား နှိပ်ပါ။
၂။ PayPal အကောင့်စတင်ပြုလုပ်ရန်အတွက် “Buy with Paypal” အောက်ရှိ “Get Started” Button အား နှိပ်ပေးပါ။
၃။ နိုင်ငံတွင် Singapore ကိုရွေးပြီး First Name, Last Name, Email Address, Create Password တို့ကို ဖြည့်ပါ။ အားလုံးဖြည့်ပြီးလျင် Next ကိုနှိပ်ပါ။
၄။ ဤအဆင့်တွင် PayPal အကောင့်ပြုလုပ်ရန်အတွက် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များအား ဖြည့်သွင်း ရပါမည်။ အချက်အလက်များအား မဖြည့်သွင်းမီ Singapore Address တစ်ခုနှင့် Singapore ဖုန်းနံပါတ် တစ်ခုအား ကြိုတင်ရှာထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချက်အလက်များအား ဖြည့်သွင်းပြီးလျင် Agree ဖြစ်ကြောင်း (√ ) လုပ်၍ Agree and Create Account ကို ကိုနှိပ်ပေးပါ။
၅။ နောက်အဆင့်မှာတော့ အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရပါလိမ့်မည်။ မိမိ Visa/ Master Card နှင့် ချိတ်ဆက်လိုပါက Linkacard to start using your PayPal account ကိုနှိပ်နိုင်ပြီး Go Shopping အောက်မှ Get Started ကို နှိပ်ရင်လည်း Card Information တောင်းပါလိမ့်မည်။
၆။ မိမိ Card Information များအား ဖြည့်လိုက ဖြည့်နိုင်ပြီး မဖြည့်လိုပါက I’ll do it later ကိုနှိပ်ပါ။
၇။ အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရလျင် မိမိ PayPal Account ဖွင့်ခဲ့သော Email ထဲသို့ “Complete your PayPal account setup” ဆိုသည့် mail တစ်စောင် ရောက်ပါလိမ့်မည်။ အကောင့်ပြုလုပ်ခြင်း ပြီးပြည့်စုံရန် Email အတည်ပြုပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
၈။ Email ထဲသို့ အောက်ပါအတိုင်း “Complete your PayPal account setup” ဆိုသည့် mail ရောက်လာလျင် Email confirm လုပ်ရန်အတွက် “Yes, this is my mail” ဆိုသည့် စာကို click လုပ်ပါ။
၉။ PayPal Login Page ပေါ်လာလျင် PayPal Account ဖွင့်ခဲ့စဉ်ကပေးခဲ့သော password ကိုဖြည့်၍ Confirm Email Address ကိုနှိပ်ပါ။
၁၀။ အောက်ပါအတိုင်း မြင်တွေ့ရလျင် PayPal Personal Account တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာဖွင့်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ သင့် Paypal Account ကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပါပြီ။
Credit : Tint Nain post မှ ကူးယူ ဖော်ပြ ပါသည် ။
ပ လပ် စ တစ် ကပ် ပြား လေး ပေါ် မှာ VISA / Master Card လို့ ရေး ထား တိုင်း - Credit card မ ဟုတ် ပါ ။ လူ တစ် ယောက် ရဲ့ တန် ဘိုး ကို . . . အ ရည် အ ချင်း . . . လုပ် ရည် ကိုင် ရည် . . . အ ကျင့် စာ ရိ တ္တ ဖြောင့် မတ် မှု ဒီ ( ၃ ) ခု နဲ့ တိုင်း တာ ပါ တယ် ။
လူ တစ် ယောက် ရဲ့ တန် ဘိုး နဲ့ က မ္ဘာ ပေါ် က Credit Card များ . . . . . . . . . နိုင် ငံ ခြား တိုင်း ပြည် တွေ မှာ အ နေ ကြာ လို့ - နိုင် ငံ ခြား ကို အ ထင် ကြီး ပြီး ရေး တာ မ ဟုတ် ။ လူ တစ် ယောက် ရဲ့ တန် ဘိုး ကို - စ နစ် တ ကျ ဘယ် လို တွက် ချက် နိုင် တယ် ဆို တာ သိ စေ ချင် လို့ ဖြစ် ပါ တယ် ။ လူ တစ် ယောက် ရဲ့ တန် ဘိုး ကို - . . . အ ရည် အ ချင်း . . . လုပ် ရည် ကိုင် ရည် . . . အ ကျင့် စာ ရိ တ္တ ဖြောင့် မတ် မှု ဒီ ( ၃ ) ခု နဲ့ တိုင်း တာ ပါ တယ် ။ ဘယ် လို တိုင်း သ လဲ ကြည့် ရ အောင် ။ Credit card စ နစ် ။ လူ ငယ် တ ယောက် ကျောင်း ပြီး လို့ / ဒါ မှ မ ဟုတ် ကိုယ် ပိုင် လုပ် ငန်း နဲ့ အ လုပ် စ လုပ် ပြီ ဆို ပါ စို့ - ဘာ Credit card မှ မ ရှိ သေး ပါ ။ ကုန် တိုက် ကြီး တွေ ( စိန် ဂေ ဟာ / City Mart လို Super Market လို ) မှာ ဈေး ဝယ် ရင်း က နေ - ဒီ လုပ် ငန်း တွေ က အ ကြွေး ဝယ် လို့ ရ တဲ့ / ကု မ္ပ ဏီ ကဒ် တွေ ထုတ် ပေး ပါ တယ် ။ Line of Credit ခေါ် ပါ တယ် ။ ပိုက် ဆံ ပါ စ ရာ မ လို - ပ လပ် စ တစ် ကဒ် နဲ့ဝယ် လို့ ရ တော့ / ပို ဝယ် ဖြစ် တယ် ဆို တာ လည်း မှန် ပါ တယ် ။ ဒါ က တော့ . . . ကိုယ့် အ တိုင်း အ ဆ နဲ့ ကိုယ် ထိန်း ပေါ့ ။ ဒီ မှာ တင် - လူ တစ် ယောက် ရဲ့ " စ နစ် " က စ ပြီ / ကိုယ် ဘယ် လို လူ မျိုး လဲ ? တ လ လုံး သုံး ခဲ့ သ မျှ - လ ကုန် ရင် အ ကုန် ပြန် ဆပ် / ဘာ အ တိုး မှ ပေး ရန် မ လို ပါ ။ အ ချိန် ( ၁၀ ) ရက် ပေး ထား ပါ တယ် ။ အ ကုန် ပြန် မ ဆပ် နိုင် သေး ရင် - Balance ရဲ့ ၁၀% ပြန် ဆပ် / ကျန် ငွေ အ ပေါ် အ တိုး ပေး ရ ပါ မယ် ။ အ တိုး က တော့ များ တယ် / ဘဏ် တိုး ထက် ( ၂ ဆ ) ကျော် မယ် ။ ကဒ် ပြား ထုတ် ပေး တဲ့ ကု မ္ပ ဏီ က - သင့် နံ မည် / သင့် Account ကို အ ကြွေး ကွန် ယက် ( Credit Network ) မှာ ထည့် ပေး လိုက် ပါ ပြီ ။ ဒီ လို နဲ့ ( ၆ ) လ / တစ် နှစ် ကြာ လာ တော့ . . . Credit Score မှာ သင် ရ လာ တဲ့ " ကိန်း ဂ ဏန်း " က တက် လာ တယ် ပေါ့ ။ ဒီ အ ချိန် မှာ . . . ဘဏ် တိုက် ကြီး တွေ / လုပ် ငန်း အ ကြီး ကြီး တွေ က - သူ တို့ ရဲ့ Credit card ကို လက် ခံ ဘို့ ကမ်း လှမ်း လာ ပါ ပြီ ။ သူ တို့ ဆီ မှာ ပိုက် ဆံ အပ် ရန် / Account ဖွင့် ရန် မ လို အပ် ပါ ။ သူ တို့ ဘဏ် / ကု မ္ပ ဏီ ရဲ့ - VISA / MasterCard တွေ ပေါ့ ။ ဒီ ကဒ် တွေ ကျ တော့ ဆိုင် တ ဆိုင် ထဲ မှာ တင် မ ဟုတ် တော့ ဘဲ - တ က မ္ဘာ လုံး မှာ သုံး လို့ ရ ပါ တယ် ။ စ စ ချင်း . . . ထုတ် ပေး တဲ့ Standard / Classic cards တွေ မှာ တော့ - $ 3000 လောက် အ ထိ / အ များ ဆုံး သုံး စွဲ ခွင့် ရှိ မှာ ပါ ။ နှစ် တွေ ကြာ လာ သည် နှင့် အ မျှ - Credit Limit = $ 6000 / $ 1,0000 နဲ့ $ Unlimited ထိ တက် လာ မှာ ပါ ။ Classic card က နေ Gold card အ ဆင့် / Platinum card အ ဆင့် တွေ ဖြစ် လာ ပါ မယ် ။ သင့် ရဲ့ Credit Score က လည်း မြင့် သ ထက် မြင့် လာ ပြီ ပေါ့ ။ Line of Credit ကို ကုန် တိုက် ကြီး တွေ က ထုတ် ပေး သ လို - ကား တစ် စီး ကို အ ရစ် ကျ စ နစ် နဲ့ ဝယ် တာ မျိုး / အိမ် တိုက် ခန်း အ ရစ် ကျ ဝယ် တာ မျိုး တွေ မှာ လည်း / ထုပ် ပေး နိုင် ပြီး သင့် နံ မည် ( Account ) ကို Credit Score ရ လာ အောင် လုပ် ပေး ကြ ပါ တယ် ။Credit Card တွေ က တော့ အ များ ကြီး ပေါ့ ။ American Express / VISA / Master / Discover / Diners' Club စ သည် ဖြင့် . . . ။ လုပ် ဆောင် ပုံ က တော့ အား လုံး အ တူ တူ ပါ ဘဲ ။ ဒီ Credit Cards တွေ အား လုံး က Credit Network တစ် ခု ထဲ က နေ - သင့် Credit Score ကို ထိန်း နေ တာ ဖြစ် ပါ တယ် ။ ကြွေး ပြန် မ ဆပ် လို့ / လိမ် ညာ လို့ . . . " Bad Credit " ဝင် သွား ပြီ ဆို ရင် တော့ - နောက် ထပ် ဘယ် Card မှ မ ရ နိုင် တော့ ပါ ။ You are DONE. သင့် တန် ဘိုး ကို ပြ တဲ့ Credit card သင့် မှာ Standard card လောက် ဘဲ ရှိ ရင် - ကု မ္ပ ဏီ သေး သေး / ဈေး ခပ် ပေါ ပေါ ကား လောက် ငှါး စီး လို့ ရ ပါ မယ် ။ ဒါ တောင် အ ပေါင် သ ဘော မျိုး / အာ မ ခံ တွေ ဘာ တွေ ဝယ် ခိုင်း ကောင်း ဝယ် ခိုင်း ပါ လိမ့် မယ် ။Gold card လောက် ဆို ရင် - Toyota Corolla နဲ့ အ ထက် / ကား တော် တော် ကောင်း ကောင်း တွေ / အာ မ ခံ မ ယူ ဘဲ ငှါး လို့ ရ ပါ ပြီ ။ Credit card က အာ မ ခံ ထား လို့ ပါ ။Platinum နဲ့ Unlimited Card ကိုင် ထား ရင် တော့ - လက် ထဲ မှာ ငွေ ရှိ စ ရာ မ လို ။ Ferrari / Lamborghini / Porsche / Aston Martin ကြိုက် တဲ့ ကား သာ ပြော - သင် စီး နိုင် ပါ ပြီ ။ငွေ မ လို / သင့် တန် ဘိုး က ဒါ ပါ ဘဲ ။ သင့် ရဲ့ ' အ ရည် အ ချင်း ' . . သင့် ရဲ့ ' လုပ် ရည် ကိုင် ရည် ' . . သင့် ရဲ့ ' မှန် ကန် တဲ့ အ ကျင့် စါ ရိ တ္တ ' တွေ က - သင့် ဘ ဝ ကို မြှင့် တင် ပေး လိုက် ပါ ပြီ ။ Credit Score ဆို တာ အ ခွင့် အ လမ်း ။ ဥ ပ မာ - အိမ် ခန်း ငှါး နေ ရ တဲ့ ဘ ဝ က နေ / ငွေ လေး စု မိ ဆောင်း မိ လာ လို့ / အိုး ပိုင် အိမ် ပိုင် နဲ့ နေ ချင် ပြီ ဆို ပါ စို့ ။ ငွေ တ လုံး တ ခဲ ထဲ ပေး အိမ် ဝယ် ဘို့ ဆို တာ သိပ် မ လွယ် လှ ပါ ။ အိမ် ကောင်း ကောင်း ဝယ် မယ် ဆို ရင် - ဒေါ် လာ သိန်း ဂ ဏန်း အ ထိ - ငွေ ချေး ရ ပါ တော့ မယ် ။ ဘဏ် တွေ က လည်း ချေး ချင် ကြ ပါ တယ် / အ တိုး ရ မဲ့ ကိ စ္စ ဘဲ ။ ခက် တာ က - ဒီ လူ ကို ဘယ် လို ယုံ ကြည် ပြီး / ဒိ လောက် များ တဲ့ ငွေ တွေ ချေး ရ မှာ လဲ ။ Credit System က ရှိ နေ တော့ - စုံ ထောက် ငှါး ပြီး / သင့် နောက် ကြောင်း လိုက် စုံ စမ်း ရန် မ လို ပါ ။ သင့် ရဲ့ Credit Rating ကို ရှာ ကြည့် လိုက် တာ နဲ့ - Loan approved ကို မိ နစ် ပိုင်း အ တွင်း မှာ လုပ် / ချက် ချင်း ငွေ ထုတ် ချေး ပေး လိုက် နိုင် ပါ တယ် ။ နောက် ဥ ပ မာ တ ခု . . . အ ဆက် အ သွယ် ရ လို့ / အ ကြံ ဉာဏ် ကောင်း ရ လာ လို့ - လက် ခ စား လုပ် နေ ရာ က နေ / ကိုယ် ပိုင် လုပ် ငန်း တည် ထောင် တော့ မယ် ဆို ပါ စို့ ။ အ ရင်း အ နှီး က အ များ ကြီး လို လာ ပြီ ။ ဘယ် လို ရှာ မ လဲ ? Credit ကောင်း နေ သူ တ ယောက် အ တွက် က တော့ ပူ စ ရာ မ လို ပါ ။ ဟို ဘဏ် က သူ့ ဆီ က ငွေ ယူ ပါ / ဒီ ဘဏ် က သူ့ ဆီ က ယူ ပါ - အ တိုး လျှော့ ပေး မယ် / ( ၆ ) လ ဆိုင်း ငံ့ ပေး မယ် ဆို ပြီး / Offer တွေ က ဝိုင်း ဝိုင်း လည် နေ တာ ပါ ။ မြန် မာ ပြည် က သီ ချင်း တ ပုဒ် လို ပေါ့ - " ခါ ချ နေ ရ တယ် " ။Credit ပို ကောင်း လာ သည် နှင့် အ မျှ - ချေး ငွေ အ ပေါ် ပေး ရ တဲ့ / ဘဏ် အ တိုး နှုန်း က လည်း လျော့ ကျ သွား လိုက် တာ / နောက် ဆုံး တော့ ပါး ပါး လေး ဘဲ ပေး ရ ပါ တော့ တယ် ။ သင့် အ တွက် အောင် မြင် မှု တွေ ရ လာ ဘို့ လမ်း ခင်း ပေး လိုက် သ လို ပါ ဘဲ ။ ဒါ ကြောင့် . . . အ ကြံ ဉာဏ် ရှိ သူ / အ လုပ် ကြိုး စား သူ တွေ အ တွက် က တော့ - Credit Score ဆို တာ ဖွင့် ပေ ထား တဲ့ အ ခွင့် အ လမ်း ပါ ။ Credit card က ဘယ် လို အာ မ ခံ သ လဲ ? ကျ နော် US ကို ရောက် ခါ စ - လမ်း တွေ သိပ် မ ကျွမ်း သေး ခင် ပေါ့ ။ Corolla ကား အ သစ် လေး တ စီး ငှါး မောင်း လာ ရင်း - Hollywood မှာ ကိုယ် ကွေ့ ရ မဲ့ လမ်း ကို မြင် မြင် ချင်း / အ ချက် ပြ မီး မ ဖွင့် ဘဲ ကွေ့ ဝင် လိုက် ပါ တယ် ။ နောက် က လိုက် လာ တဲ့ အ မေ ရိ ကန် ကား ကြီး ကြီး တ စီး က - နောက် ဘက် ဒေါင့် ကို တိုက် မိ ပြီး ကျ နော့် ကား Bumper ပြုတ် ထွက် သွား ခဲ့ ပါ တယ် ။ တိုက် သွား တဲ့ ကား က ခပ် ကြီး ကြီး ဆို တော့ သိ ဟန် တောင် မ ပေါ် ပါ ။နောက် တ နေ့ . . . ကား ပြန် အပ် တော့ အ ကြောင်း စုံ ကို ရှင်း ပြ ပါ တယ် ။ ကား ငှါး တဲ့ ကု မ္ပ ဏီ က Credit card ကို တ ချက် ကြည့် လိုက် ပါ တယ် ။ " Don't worry , your card take care of it " လို့ ပြော ပြီး / ကား ကို လက် ခံ ထား လိုက် ပါ တယ် ။ လ ကုန် တော့ - VISA Card ရဲ့ Statement မှာ ကား ပြင် စ ရိတ် $ 120 ပေး လိုက် ရ ကြောင်း သာ ဖေါ် ပြ ထား ပြီး / ကျ နော့် ဆီ က တ ပြား တ ချပ် မှ ပြန် မ တောင်း ပါ ။ " သ တိ " - မြန် မာ ပြည် က Debit card တွေ နဲ့ မ မှား စေ နဲ့ ။ ပ လပ် စ တစ် ကပ် ပြား လေး ပေါ် မှာ VISA / Master Card လို့ ရေး ထား တိုင်း - Credit card မ ဟုတ် ပါ ။ မြန် မာ နိုင် ငံ ဘဏ် တွေ က - ကိုယ့် Account မှာ ငွေ ရှိ သ လောက် ကပ် ပြား ပြ ပြီး သုံး လို့ ရ အောင် / Debit card ( VISA / Master ) တွေ ထုတ် ပေး လေ့ ရှိ ပါ တယ် ။ ကိုယ့် ငွေ Balance မ ရှိ ရင် သုံး မ ရ တော့ ပါ ။သူ တို့ က ပြော ချင် ပြော မယ် - ဂျ ပန် တို့ / ဟောင် ကောင် တို့ နဲ့ ချိပ် ဆက် ပေး ထား ပြီး / နိုင် ငံ ခြား တိုင်း ပြည် တွေ မှာ သုံး လို့ ရ တယ် / ဘာ ညာ ပေါ့ ။ သုံး လို့ ရ မယ် လေ - အဲ ဒီ နိုင် ငံ မှာ ချိပ် ထား တဲ့ ဘဏ် တိုက် ကို လိုက် ရှာ ပြီး ငွေ ထုတ် ယူ နိုင် မယ် ပေါ့ ။ လမ်း ဘေး က ဆိုင် တ ဆိုင် မှာ ခေါက် ဆွဲ ကျော် မှာ စား ပြီး / အဲ ဒီ Card နဲ့ ပေး ကြည့် ပါ လား - ရ / မ ရ ။ ကျ နော့် ကို Credit card ထုတ် ပေး ထား တဲ့ ဘဏ် တိုက် ကြီး တွေ မှာ - ကျ နော့် Account တွေ မ ရှိ သ လို / ကျ နော့် ပိုက် ဆံ တ ပြား တ ချပ် မှ အပ် မ ထား ပါ ။ ဒါ ပေ မဲ့ ဒီ ကပ် တွေ က - လမ်း ဘေး ဆိုင် က နေ Five Stars Hotel ကြီး တွေ ထိ / Worldwide သုံး လို့ ရ ပါ တယ် ။ ဘယ် လို ကား မျိုး စီး ချင် လဲ ? ငွေ ထုတ် မ လား ? ကိုယ် ရောက် နေ တဲ့ နိုင် ငံ ရဲ့ ATM စက် တွေ မှာ - တစ် နေ့ လျှင် US $ 2000 နေ့ စဉ် ထုတ် လို့ ရ ပါ တယ် ။ နှစ် ပါတ် အ ထိ ပေါ့ ။ ဒါ မျိုး ကဒ် ကို Credit card လို့ ခေါ် ပါ တယ် ။ မြန် မာ နိုင် ငံ ဘဏ် တိုက် ကြီး တွေ ကိုယ် တိုင် က - Debit Card ကို / ဒါ Credit Card ပါ ဆို ပြီး ထုတ် ပေး နေ ရင် တော့ . . . ဖြောင့် မတ် တဲ့ အ ကျင့် စာ ရိ တ္တ ကို ဘယ် လို တည် ဆောက် ကြ မှာ လဲ ? Credit Card - Debit Card ကွဲပြား ခြားနား ပုံကို စာရေးသူ ကို တင့် နိင်မှ ဗဟုတတရစေရန် လေ့လာလိုသူများအတွက်